Samsung Galaxy J5 (2017) - နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တရားဝင်ပြန်ဆိုချက်များ | Androidsis
Samsung သည်ယခုနှစ် Galaxy J စီးရီးအတွင်းစမတ်ဖုန်းအသစ်သုံးခုကိုစတင်ရန်မျှော်လင့်ရပြီးတစ်ခုစီသည်ဈေးကွက်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အဆိုပါမိုဘိုင်း Galaxy J3, Galaxy J5 နှင့် Galaxy J7 (2017)မကြာသေးမီက၎င်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြသောအချို့သောယိုစိမ့်မှုများ၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည်
ဤမိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်များ၏ဗားရှင်းအချို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသည်ဥရောပတွင်တရားဝင်ပွဲထုတ်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းစာထုတ်လွှင့်သည့် Galaxy J5 (2017) နှင့်၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
Samsung Galaxy J5 (2017), နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
Galaxy J5 (2017) သည်သတ္တုဒီဇိုင်းနှင့် HD resolution (5.2p) ပါသည့် ၅.၂ လက်မအရွယ် Super AMOLED မျက်နှာပြင်ကြောင့်အကောင်းဆုံးပုံရိပ်ကိုရရှိစေသည်။
hardware ပိုင်းအရစမတ်ဖုန်းတွင်ပရိုဆက်ဆာထည့်သွင်းထားသည် 7870GHz Octa-Core Exynos 1.6နှင့်အတူ 2GB RAM နှင့် 16GB သိုလှောင်ရန်နေရာ, microSD မှတဆင့်ချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ။
Terminal ၏နောက်ဖက်နှင့်ရှေ့ဖက်တွင် 13 megapixel resolution ရှိသည့်ကင်မရာများကိုတွေ့ရှိရသည်။ aperture သည်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိသော်လည်း (နောက်ဘက်အာရုံခံရှိ F / 1.7 နှင့်ရှေ့အာရုံခံကိရိယာတွင် F / 1.9) ။
သတိပြုသင့်သည်မှာ Galaxy J5 ၏ရှေ့ဖက်ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူလခလုတ်သည်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းကွန်ရက်များအတွက်အထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မည်။ LTE၊ ဝိုင်ဖိုင်နှင့် Bluetooth.
နောက်ဆုံးတွင် Samsung Galaxy J5 (2017) ကို operating system ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat နှင့်တစ် ဦး ဘက်ထရီရပါလိမ့်မယ် 3000mAh.
စမတ်ဖုန်းကိုလာမည့်ဇွန်လတွင်ဥရောပ၌စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည် 279 ယူရို အခမဲ့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy J5 (2017) - နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တရားဝင်ပြန်ဆိုချက်များ